Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 07/06/2020)
yekushanyirana waini kumatunhu ari Europe hope nerimwe waini connoisseur. Zvinoshamisa kwazvo yemizambiringa, inodziya uye jeka ekunze, enchanting mujinga, uye zvokudya zvakanaka kutsanangura izvi waini pamusoro nharaunda. Kana uri waini anoda uye tinoda kuona Best Wineries In Europe And How To Get There, Save A Train achakubatsira wasvikapo!
Verenga kuziva chii Europe ine kupa vanoda waini. We Bet ungadai kare dzaizara mupfungwa dzako usati mokupedza ino!
The Rhone Valley waini nharaunda ine zvakawanda kupa kubva tsika pfungwa pamwe Lyon ari mumwe UNESCO World Heritage Sites. With kwayo nyore, zvechokwadi gastronomy, The Rhone iri waini anoda kuti denga pamwe yakakurumbira waini kuti Crozes-Hermitage, Cote-Rotie uye Chateauneuf-du-Pape richiswedera waini vashanyi vanobva pasi pose.
The Tuscany wineries kupa waini akakwana nyika ruzivo. Haingori chete iyo Tuscany ine mamwe Italy kuzivikanwa kwakanyanya, kufanana idzva Val d'orcia Doc, Viini Nobile von Montepulciano, nharaunda yacho anobuda kuzvikudza, rudo nyika, uye yakakura mufaro nokuudzawo vamwe.
Mhuri chete pave Riesling kwavo 4.2 hectares nyika ayo achishandisa zvakakwana pakati acidity uye mamiriro inozivikanwa. The achitsoropodza-acclaimed waini vari anoparadzirwa munyika yose. Kana uchida ravira waini pamusoro-panzvimbo, kuva nechokwadi kuti bhuku waari kumashure.
kekutanga maziso ako pachigaro yaro poromoka tenuka, uri akarova nokuda impracticality kwayo zvose. (Kunyanya kuposita munhu hombodo mashomanana ewaini). Vanoonekwa UNESCO somunhu World Heritage Site, divi ichi zuva-wakaropafadzwa Lake Geneva rinovayeuchidza munhu fairytale yokuvira ruva akazadzwa balconies, shimmering mvura zvitema kuti chete inogona vakwaniswe mberi negirazi omunzvimbo Chasselas. Saizvozvowo, yayo mugungwa-vachimbundirana kwokurangana kubhururuka pa kwekupedzisira slants that only a mountain goat and team should harvest.
Taundi wekuLausanne anonyatsorayiridzwa rakamiswa pamugumo Lavaux. Zvinoita kuti zvakanaka maonero kuti kuongorora nharaunda. Within Switzerland, WekuLausanne Chokwadi muridzi ruzhinji kana totaura yemizambiringa. (The Tauriranai ane waini kukura nharaunda hapana muduku pane 62 nhabvu minda, runobereka kusvika 400’000 hombodo gore negore.)
Kutsigira mabhegi ako uye akamurairawo magirazi yako. Ndiyo nguva kubata chitima kana vaviri kuona Best Wineries mu Europe. Save A Train achakupa kutsanya uye dzichikunetsa vakasununguka matikiti vasina mari zvakavanzika. Wakamirira chii? Nguva kuti waini yako, pamusoro!
Unoda embed yedu Blog romukova Best Wineries In Europe And How To Get Ikoko pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)